सबै क्रासोडार रेलवे स्टेशन सन्दर्भ फोनको बारेमा, आधिकारिक वेबसाइट
Pashkovsky एयरपोर्ट: कसरी क्रासोडर रेलवे स्टेशन
Krasnoder एयरपोर्टबाट बस
नयाँ आधुनिक सुवेलोविक होटल क्रासोडर 1 रेलवे स्टेशनबाट minutes मिनेटको पैदल यात्राको मुटुमा अवस्थित छ।
<< p> होटल अतिथिहरू नि: शुल्क उच्च-गति वाइ-फाई, लगेज भण्डारण र नि: शुल्क पार्किंग प्रदान गरिन्छ। होटल "सुउरोभर्भ" सँग224 घण्टा अगाडि डेस्क छ।
सहज कोठा सबै आवश्यक फर्निचर, स्प्लिट-प्रणाली, फ्ल्याट-स्क्रिन टिभी र फ्रिजले सुसज्जित छन्। निजी बाथरूमको ह्याध रियरर, नि: शुल्क ट्रिनरहरू र चप्पल हुन्छ।
krageoder 1 रेल स्टेशन - kragnodorder अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा 1 km किलोमिटरसम्म, न्यू स्टेडियमको आन्द्पानाधी - km किलोग्राम कुँडी एक्सपोज्रेट रिक्सेटेक्टर होटेलबाट6किलोमिटर छ, र दक्षिण दक्षिणमा 1 km किलोमिटर टाढा छ।
Basskaya सडकमा नजिकैको टर्न बन्दको साथ, तपाईं सीधा Krasnoder शैक्षिक ड्रएम थिएटरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। गोरकी।
क्षेत्रीय केन्द्रमा 1000 भन्दा बढी ठाउँहरू रेलहरूको अस्थायी प्लेसनको लागि आरक्षित थिए, क्रासोडर-1 स्टेशनमा ढिलाइ भयो। पहिलो होटलहरूको बीचमा 120 बालबालिकाहरू हुन् जसले ट्रेनमा ड्राइभ गर्दै थिए "सेन्ट पीटर्सबर्ग - एडलरसँगै अशक्तताहरू।
- krasnodar, सम्पूर्ण किनार सहित, एक कठिन अवस्था मा मानिसहरूलाई तत्वहरु को कारण को कारण मद्दत गर्दछ। यो तातो खाना र अस्थायी आधिकारिक आराधना द्वारा सहयोग प्रदान गरिन्छ, संख्याको आवश्यक रिजर्व प्रदान गरिएको छ। नोभेम्बर225-26 को रात, कराईसोथर ट्राम-ट्रावरब्यालु व्यवस्थापनको 20 ट्रोलसस व्यवस्थापनको लागि2troplebussus व्यवस्थापनलाई हाइलाइट गरियो। हामी ट्रेन स्टेशन मा यात्रुहरूको ठूलो संख्या फेला पार्न अन्य ओर्जिनहरूको समाधानमा पनि सहयोग गर्दछौं - इभेनी PECHEV ले भने।
स्टेशन मा शहर को टाउको को निर्देशन मा "किरासोडर -1" एक उभरताका प्रतिनिधिहरु को224 घण्टा कर्तव्य आयोजित, जसले उभरतापूर्ण मुद्दाहरूको लागि प्रोम्प्ट सहायता प्रदान गर्दछ।
1:00 को दशकदेखि 20:00 को रूपमा रेलवे सञ्चारको निलम्बनका कारण3रेलहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो, करीव 80000 यात्रुहरू पक्राउ परेका थिए। कर्सोडडार होटेलमा "रसियन रेलवेहरू" अनुसार 1000 भन्दा बढी सिटहरू आरक्षित छन्। 22:00 देखि, बस KTTU द्वारा होटलहरू शुरू भएको होटेलमा डेलिभरी सुरु भएको छ।
<< p> पहिलो उडानहरूले 1 1600 व्यक्तिको सेन्ट पीटर्सबर्गबाट ​​120 जना र उनीहरूको साथ वयस्कहरू सहित 1 1600 जनालाई सारिदिए - एडलर ट्रेन। तिनीहरू महोत्सव-प्रतिस्पर्धा "अकेभा-अस्थायी!" गाउँमा लोओ, र माइक्रोड्रिस्ट्रिक्ट एडिनलर शहर रिसोर्ट सोचीमा एथलेटिक्सहरूको लागि शुल्क र शुल्कहरू। तिनीहरूसँग अशक्तताका साथ यात्रुहरूको साथसाथै तिनीहरूसँगै।
यसलमा, होटेलले किरासोथरमा अपेक्षा गर्ने सबै यात्रीहरू रेल सञ्चार पुनर्स्थापना गर्नका लागि अपेक्षा गर्ने सबै यातायात गर्दछ। बस द्वारा वितरण मा काम रातदिन व्यवस्थित हुनेछ।
साथै पुलिस र CSESACKS को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि सुदृढीकरण गर्दछ। शहरी अर्थव्यवस्था र ईन्धन विभाग र ईन्धन भण्डारको सेनेटरी अर्डरलाई निरन्तरता दिन 12 व्हाइटेड कन्टेनर र5किटोल। स्टेशन र आसन्न क्षेत्रले संविदा फोहोर संगठनको कर्मचारीहरूको मोबाइल समूहको काम आयोजना गर्यो।
जन व्यापार र जनसंख्याको घरेलु सेवा स्टेशनमा तातो खाना प्रदान गरिएको छ, जसले MuP तयार गर्दछ "स्कूल खाद्य बोट मतदान नम्बर 1"। करीव 20:00 करीव 30000 सर्विंगको लागि डिनर होटेलमा राखिएको प्रत्येक अस्थायी आवासको समयमा खाना आयोजना गरिनेछ।
मार्ग ट्याक्सीहरू र क्रासोसोडरको बेड फ्ल्याट धेरै सहज र सहरी आवश्यकताहरूको लागि इच्छुक छैन, र पर्यटकहरूको लागि होईन। ट्रोललीब्यूजहरू, यद्यपि बिहान सबेरै बिहानसम्म जान्छन्, बेगैंड साइटहरू वा एयर कन्डिटररहरू। बाँकी यातायात एयरपोर्टबाट मात्र 10 बजे सम्म चल्दछ। रातमा, रेलवे स्टेशन किरासोडर -1 चाँडै र अधिकतम सान्त्वनाले ट्याक्सी वा स्थानान्तरण प्रदान गर्दछ।
krasnoder अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनिन्छ, क्षेत्रको नामबाट, क्षेत्रको नामबाट, जुन अवस्थित छ। शहर केन्द्र 12 किलोमिटर भन्दा थोरै छ। यसको इलाकामा, तीन टर्मिनलहरू, जसले एक कार्गो, एक अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय वायु यातायातका लागि। किरासोडर एयरफरोफ रूसी दक्षिणमा सब भन्दा ठूलो मध्ये एक हो, त्यसैले प्राय: कालो समुद्री तटमा मार्गमा एक मध्यवर्ती पोइन्टको रूपमा छनौट गरिन्छ।
Pashkovsky बाट Krasnoder-2 रेलवे स्टेशन बाट, तपाईं बस नम्बर7पुग्न सक्नुहुन्छ। क्रासोसोडरको एयरपोर्टबाट बसले बिहान छैमा हिंड्न थाल्छ, अन्तिम उडान लगभग 22 :: 300 स्थानीय समय समात्न सकिन्छ। बस टिकट228 रूबलका साथै थप सामानको सामान पनि लाग्नेछ। उडानहरू बीचको रकम 20 मिनेट छ।
<< p> हामी तपाईंलाई कर्सोडरमा जहाँबाट कहीं पनि शटल अफर प्रस्ताव गर्दछौं - बस स्टेशन, बस स्टेशन र अन्य ठाउँहरूबाट। ला अर्डर स्थानान्तरणले होटलको प्रशासकलाई सम्पर्क गर्दछ।
दूरी शहरको केही महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूमा दूरीले तपाईंलाई उनीहरूमा पुग्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, फेडोरोभ क्लिनिक र चट्टानको केन्द्र मात्र2किलोमिटर मात्र हो, पार्क पार्क होटल नजिकै अवस्थित छ, र एक ठूलो सुपरमार्केट र पसलहरू होटेलमा एक किलोमिटर भन्दा बढि छ। त्यहाँ एक किलोमिटरमा पनि प्रसिद्ध मौचको हल छ।
प्रिय साइट आगन्तुकहरु! हामीसँग बिक्रीको लागि एक उपहार प्रमाणपत्र छ! तपाईं तिनीहरूलाई रिसेप्शनमा किन्न सक्नुहुन्छ!
200 / P0 मिटरहरू सालवेभ-shultrin Shirtrint स्टेशनबाट एक सानो सान्त्वना वर्ग कोठाको साथ एक सानो होटल हो। आरामदायक कोठाको अतिरिक्त, होटलमा क्याफे, सौना र इनडोर पोखरी छ। होटल भर वायरलेस नि: शुल्क इन्टरनेट सेवाहरू।
यात्रीहरू साइट रेलवे स्टेशनमा खोजिरहेका लामो-चिरस्थायी कोठाहरूमा खुला रातमा बस्छन्। यो सेवा भुक्तान गरिएको छ। कोठामा एक ठाउँ बुक गर्न तपाईले पासपोर्ट प्रस्तुत गर्नु पर्छ।
व्यक्तिगत लगेज वा म्यानुअल स्टिंग यात्रीहरू भण्डारण कोठा स्टेशनमा गर्न सक्दछ। सामानको लागि भुक्तानी पूर्ण वा अपूर्ण क्यालेन्डर दिनहरूको लागि चार्ज गरिएको छ।
स्टेशन भवनबाट केही मिटर कमै भुक्तानीको साथ भुक्तान पार्किंग हो। यहाँ तपाईं एक घण्टा वा एक दिनको लागि कार राख्न सक्नुहुन्छ। पार्किंग सुरक्षित छ। अशक्तताका साथ स्टक यात्री ठाउँमा।
रेलवे स्टेशनको भित्ताहरूमा, आमा र बच्चाको कोठा खुला छ। यसका सेवाहरूले Preassesers प्रिस्कूल उमेरका बच्चाहरूलाई साथ साथै दोस्रो गर्भधारण अवधिमा रहेका महिलाहरूसँग प्रयोग गर्न सक्दछन्। कोठाको भ्रमण गर्न, तपाईंले नजिकैको मेडपांक्चरमा प्राप्त गर्न सकिने स्वास्थ्य स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्दछ।
सन्दर्भ र सूचना सेवाहरू यात्रुहरूको सबै कोटीहरूलाई प्रदान गरिन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई सिधा मद्दत विन्डोमा वा टेलिफोन मोडमा स्टेशनमा सिधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो केसमा, तपाईंले सन्दर्भ ट्रेन स्टेशन किरासोनाडरलाई सन्दर्भमा कर्तव्य संदर्भ सेवा सेवाको लागि कल गर्न आवश्यक छ।
मध्य क्षेत्र। । Retovo, रेलवे स्टेशन फर्निचर, .2 "टिभी, DVDCAFEL, मपो विन्डोमा, फलाम, चिया प्लेटेटिस्टम; पार्किंग
मध्य क्षेत्र। Ueima, ट्रेन स्टेशन फर्निचर, टिभी, DVDRONT, नयाँ TELOONA MEVLALEWIFI, उपग्रह टीभी
मध्य क्षेत्र। Epavan फर्निचर, LCD टिभी, यूरो2स्प्लिटट्श्टिश्चिस्टेशान्स्टेस्टेड, ईयूडी मर्मत मर्मत गर्दछ। Inikimikovol ओभन, फलामको
क्षेत्र उत्तरी अधिव्याभ। ओलिडोकोमेमबेल, टिभी, डीभीडी, टेबर्ड एमपीओ, सबै सुविधाहरू उपलब्ध छन्, माइक्रोवेवे पिरोटो पार्किंग
केन्द्र, TC "ग्यालरी" UL। मिथ्यास्टिक D। 93 चौथाई - युएल। Rask54 sq .. मि। ।, त्रुटि रडियोल्ड टिभी + DV + DVD, स्प्लिट फर्निचर, धुने
एचबीसी जिल्ला, tk "मेरिडियन" UL। एस्जुभा र स्टेशमेमब्लेब, टेलिफोन, डब्लिकफेल, स्प्लिकेमा, स्प्लिटेलको धातु प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक लोकतन्त्र ओभन,
Charomushulul जिल्ला। Tunopopovasulcullic बजार, Kgnova उत्कृष्ट मर्मत मेटिकल-प्लास्टिकको मौखिक चोक, ईमेल Inik